Xeerilaaliyaha oo u yeeray xubno ka tirsan Guddiga Batroolka | KEYDMEDIA ENGLISH
Xeerilaaliyaha oo u yeeray xubno ka tirsan Guddiga Batroolka
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa u yeeray afar xubnood oo ka tirsan guddiga batroolka Soomaaliyeed, xilli uu socdo baaritaanka heshiiska uu Wasiirka Batroolka la galay Soma Oil and Gas.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waraq ka soo baxday Xaafiiska ku-simaha Xeerilaaliyaha guud ee qaranka, Dr. Farxaan Xuseen Maxamed, oo nuqul ka mid ah soo gaaray Warqabadka Keydmedia Online, ayaa loogu yeeray, afar xubnood oo ka tirsan Guddiga Batroolka Soomaaliya.
Xubnahaan oo kala ah Caasha Cismaan Axmed, oo Guddoomiye ku xigeyn ka ah, Hay’adda Bartoolka Soomaaliya, Cabdiqaadir Aadan Maxamuud, Ibraahim Cabdiqaadir Maxamed iyo Cabdixafiid Cali Dirir, ayaa lagu wargaliyay in ay 06/03/2022, hor tagaan Xaafiiska Xeerilaaliyaha.
U yeeridda xubnahaan, ayaa ku soo beegantay, xilli uu dhawaan Wasiirka Batroolka, Eng Cabdirashiid Maxamed Axmed, 15-kii bishii hore Coastline Petroleum, u saxiixay heshiis shidaal oo wax soo saar wadaag 7 xirmood ah, kaas oo Rooble iyo Farmaajo, wax kama jiraan ku tilmaameen.
Marwada iyo mudanayaasha ay waraaqdani ku socoto, waxaa la idin ka doonayaa in aad timaaddaan, Xaafiiska Xeerilaaliyaha Guud ee Qaranka, maalinta Axadd ah oo ay taariikhdu tahay 06/03/2022, 11-ka subaxnimo si wax la idin kaaga weydiiyo arrimo aad wax ka ogtihiin. Ayaa lagu ka soo baxay Xeerilaaliyaha.
Hay’adda Batroolka Soomaaliya (SPA) ayaa xubnahaan magacawday bartamihii Oktoober 2020, kuwaas oo kala matalaya dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir iyo Dowladda dhexe, waxayna qeybtood goobjoog ka ahaayeen sixiixii ka dhacay London.
Caasha Cismaan Axmed, waxa ay hay’adda ku mataleysa Maamulka Gobolka Banaadir, Cabdulqaadir Aadan Maxamuud [Galmudug], Ibraahim Cabdulqaadir Maxamed [Koonfur Galbeed] iyo Cabdixaafid Cali Dirir, [Soomaaliland].
Xubnahaan ayaa u xil saaran, in ay hubiyaan in sharciyada horumarinta maaliyaddeed ee lasoo saaray ay la jaanqaadayaan mabaadi’da sinnaanta, la xisaabtanka, daah furnaanta iyo takoor la’aanta danaha dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Sidoo kale, waxa ay ay u xil saaran yihiin hubinta, in dhamaan maamuladu ay awoodaan inay gacan ka geystaan qaabeynta horumarka warshadaha ayna soo jiitaan maalgashi caalami ah si loo kordhiyo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya.
Hantidhawrka Guud ee Qaranka, Maxamed Maxamuud Cali, ayaa dhankiisa, 20 February 2022, Wuxuu Gal-dacwadeed baaris oo saxiixa shidaalka la xariira u diray Xafiiska Xeerilaaliyaha, halka uu heshiiska ku tilmaamay xatooyo xoolo dad-weyne.